Nankato Ny Fitovian-jo Amin’ny Fanambadiana i Taiwan, An’Aliny Ireo Nanatrika Ny Diabem-pireharehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2014 19:49 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Italiano, বাংলা, Français, Español, 日本語, English
Olona teo amin'ny 70.000 teo no nanatrika ny diabem-pireharehanan'ny LGBT tao Taiwan tamin'ny 25 Oktobra mba hankalaza ny karazam-pironana ara-nofo sy ny fanondroana maha-lahy sy vavy ary hanentana ny vahoaka mba hanao tahaka izany ihany koa.
Anisan'ny be mpandray anjara indrindra hatramin'ny nisian'ny diabe voalohany tamin'ny taona 2003 izy ity. Nandritra ny taona vitsy lasa, nanjary diabem-pireharehana goavana indrindra tao Azia sy nahasarika mpandray anjara avy any ampitan-dranomasina marobe izany.
Naneho ny fanohanany ny fametrahana ho ara-dalàna ny fanambadian'ny olon-droa mitovy taovam-pananahana ny ankamaroan'ireo mpandray anjara tamin'ny diabe. Natolotry ny Firaisan'i Taiwan Ho Fampiroborobona Ny Zo Sivilin'ny Fiarahana tamin'ny taona 2012 tao amin'ny Antenimiera Yuan ny volavolan-dalànan'ny fitovian-jo amin'ny fanambadiana. Nandinika voalohany ny volavolan-dalàna ny solombavambahoaka tamin'ny 25 Oktobra 2013, saingy nihantona izany noho ny fanentanana goavana nataon'ireo mpanohitra ny fanambadian'ny olon-droa mitovy taovam-pananahana.
Nanomboka nanery ireo solombavambahoaka ny mpikatroka ny zon'ny pelaka mba hamerina hijery indray ny asany tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra tamin'ity taona ity ary notontosaina ampahibemaso tamin'ny 16 Oktobra ny fivoriana azon'ny rehetra atrehina handinihana ny volavolan-dalàna. Nanaraotra ny diabem-pireharehana tamin'ity taona ity ny maro tamin'ireo mpifankatia avy ao amin'ny fiarahamonina LGBT mba hizara amin'ny hafa ny tantaran'izy ireo sy ny fanantenany.